Sida looga falceliyey dilkii Muqdisho loogu gaystay Axmed Mukhtaar – Madal Furan
Hoy > Warka > Sida looga falceliyey dilkii Muqdisho loogu gaystay Axmed Mukhtaar
Sida looga falceliyey dilkii Muqdisho loogu gaystay Axmed Mukhtaar
Editor September 25, 2018 Warka 0
Madal Furan – Quluubta dad badan oo Soomaali ah waxaa qabsaday dilkii arxan darrada ahaa ee loo gaystay marxuum Axmed Mukhtaar Saalax.
Guubaada guurka dadka la quursado
Baraha bulshada waxaa ka bilawday ol’ole wacyigelin ah oo lagu dhiirigalinayo guurka dadka la takooro.
Ol’ole lagu caawinayo qoyskii uu marxuumka ka tagay oo ay hurmuud ka yihiin “Somalifaces” ayaa baraha bulshada ka bilaabay olole ay ugu magac dareen kuligeen waynu simannahay, taasi oo aad looga falceliyey.
Maryam Qasim oo horay u ahayd wasiir ka tirsan dowlada Soomaaliya ayaa barta Twitter-ka ku taageertay ol’olahan kuligeen waynu simannahay.
“Murugada iigu xannuunka badan, hadda waa sidii aan ugu sharixi lahaa carruurtayda in abahood loo dilay sababtoo ah qabiilka ay ka dhasheen awgeed, iyaguna halistaas ku jiraan marka ay qaangaaraan” ayey marwada marxuumka ka dhintay u sheegtay Somalifaces.
“Odayaal ayaa isaga yimid arrinta oo ka wada xaalay, sidaa darteedna waxay go’aan isla gaareen reerka ay gabadhu ka dhalatay, hase yeeshee gabadha hooyadeed iyo abtiyaasheed ayaa ka biyo diiday, kuwaas oo bam gacmeed adeegsaday” ayuu yiri Nuur.
Wuxuu intaa ku daray in la xiray dadkii falka lagu tuhmay inay gaysteen oo ay ku jirto gabadha hooyadeed, laakinse “odayaashii dhinaca abtiyaasha” ay wacad ku mareen in “tallaabo ficil ah ay ka qaadi doonaan xarigaas.”
Tallaabadaas ayuu sheegay in ay noqotay in weerar lagu qaado Axmed Mukhtaar Saalax oo ay weeraraan “dad gaaraya 15 qof, kuwaas oo ku hubaysnaa mindiyo, baangado iyo eebooyin” ayuu yiri.
Wuxuu intaa raaciyey in “baasiin lagu shubay, ka dibna la gubay”. Laakiin ma cadda in markii uu dhintay meydkiisa la gubay, ama isagoo nool dab la qabadsiiyey.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo sheegay inuu dhamaaday wakhtigii Imaaraadku ciidamadda Soomaaliya mushahar siin lahaayeen, ayna kala wareegi doonaan.
Xog sirddoon oo Iiran la xiriiriyay weerarka Shidaalka Sacuudiga iyo Iiraan oo diiday